सरकार माफियाले चलाउँछ भन्ने प्रमाणित भएको छ -डा. गाविन्द केसीले | Khabar Dainik
सरकार माफियाले चलाउँछ भन्ने प्रमाणित भएको छ...
सरकार माफियाले चलाउँछ भन्ने प्रमाणित भएको छ -डा. गाविन्द केसीले
अाज अायाेजना गरीएकाे सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी एलाइन्स र नागरिक समाजका अगुवाहरुले गरेको ‘लोकतन्त्रको लाज’ नामक वृत्तचित्रमा‘प्रधानमन्त्रीले केही नबोल्नुले नै सरकार माफियाले चलाउँछ भन्ने प्रमाणित भएको छ।’ भनेर डा. गाविन्द केसीले प्रधान मन्त्रीले केहि पनि बालेकाेमा गुनासाे पाेखाउनुभयाे । उहाँले मेडिकल सेक्टरमा चिन्ता व्यक्त गरी त्यसकाे समाधानमा जाेड दिए ।
यस कार्यक्रममा उपस्थित महानुभाव तथा सहभागी र पहुनाहरूले नेपालकाे नराम्राे अवस्थालार्इ सुधारी कसरी अघि बढन सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गरेकाे थिए । नेपाललार्इ कसरी लाेकतान्त्रकाे लाजबाट जाेगाउन सकिन्छ भनेर सुशिला कार्की र डां गाेविन्द केसीले सम्बाेधन गरेका थिए ।
सुशिला काेइरालाले सिधै डाक्टरहरू बन्न अब राेक्नुपर्ने कुरा अघि सारेकी थइन् । काेइरालाकाे अनुसार डाक्टर पढन करडाैँ खर्च हुन्छ तर तलब भने ज्यादै निम्न भएकाेले डाक्टरहरूकाे जीवनमा अार्थीक कठीनार्इ हुने कुरा व्यक्त गरिन् । “डाक्टरहरूलार्इ राेजगारै छैन, ” उनले सावधान गराइन् ।
साे कार्यक्रममा पत्रकार रबिन्द्र मिश्र र लाेकमान सिंह कार्कीकाे पनि उपस्थिति रहेकाे थियाे ।